Beddelaan Ontology In US dollar
Updated 19/01/2020 09:24
Beddelka Ontology In US dollar. Ontology qiimaha US dollar maanta ee suuqyada isweydaarsiga lacagta digital.
10 Ontology = 6.49 US dollar
Celceliska sarrifka. Wuxuu muujiyaa celceliska qiimaha beddelka Ontology galay US dollar. 1 Ontology waa 0.65 US dollar. Ontology hoos ayuu u dhacaa. Heerka Ontology sicirka ayaa hoos u dhacay marka loo eego US dollar ee -916 boqol meelood meel dhibic boqolkiiba.
Ontology qiimaha maanta
Heerka Sarrifka Ontology In US dollar
Hal bil ka hor, Ontology waxaa laga iibsan karaa 0.54 US dollar. Seddex bilood ka hor, Ontology waxaa laga iibsan karaa 0.58 US dollar. Lix bilood ka hor, Ontology waxaa lagu iibin karaa 1.05 US dollar. Halkan waxaa lagu muujiyay jaantus heerka isdhaafsiga waqtiyo kala duwan. Isbeddelka heerka sarrifka lacagaha Ontology to US dollar ee usbuuca waa 8.99%. 7.12% - isbadal ku yimid heerka isdhaafsiga ee Ontology ilaa US dollar sanadkii.
Ontology (ONT) In US dollar (USD) qiimaha sicirka
Ontology ugu fiican US dollar
Bixinta ugu fiican Ontology qiimaha sarrifka maanta ee dhammaan suuqyada lacagta digital. Suuqa ugu fiican si aad u iibsato ama u iibiso Ontology maanta.
CEX.IO ONT/USD $ 0.70 $ 888 -
Sistemkoin ONT/USD $ 0.69 $ 690 674 -
Coinsbit ONT/USD $ 0.66 $ 1 130 -
Ontology ugu fiican US dollar dhammaan suuqyada adduunka
Beddelaadda Lacagta digital Ontology US dollar
Ontology (ONT) In US dollar (USD)
10 Ontology 6.49 US dollar
50 Ontology 32.46 US dollar
100 Ontology 64.91 US dollar
250 Ontology 162.29 US dollar
500 Ontology 324.57 US dollar
1 000 Ontology 649.14 US dollar
2 500 Ontology 1 622.86 US dollar
5 000 Ontology 3 245.71 US dollar
Hadaad leedahay 6.49 US dollar, ka dibna gudaha British Virgin Islands waa lagu iibin karaa 10 Ontology. Si loogu badalo 25 Ontology, 16.23 US dollar are are loo baahan yahay. Hadaad leedahay 32.46 US dollar, ka dibna gudaha British Virgin Islands waad iibsan kartaa 50 Ontology. Maanta, 100 Ontology waxaa lagu badali karaa 64.91 US dollar. Maanta, waxaad u beddeli kartaa 250 Ontology ee loogu talagalay 162.29 US dollar. Beddelashada 500 Ontology qiimaha 324.57 US dollar.
Ontology (ONT) In US dollar (USD) Heerka Sarrifka
Beddelaan ONT/EUR maanta 19 January 2020
19/01/2020 0.70 -0.014006 ↓
18/01/2020 0.72 0.009262 ↑
17/01/2020 0.71 0.046363 ↑
16/01/2020 0.66 -0.073511 ↓
15/01/2020 0.73 0.12 ↑
Ontology to US dollar dusheeda 19 January 2020 waa u siman yahay 0.702052 US dollar. Ontology ilaa US dollar ee 18 January 2020 - 0.716058 US dollar. 17 January 2020, 1 Ontology = 0.706796 US dollar. Inta ugu badan ee ONT / USD sicirka sarrifka ee wuxuu ahaa 15/01/2020. Ontology to US dollar dusheeda 15 January 2020 waa u siman yahay 0.733944 US dollar.
Ontology (ONT) In US dollar (USD) shaxda qiimaha taariikhda
Ontology iyo US dollar
Ontology codka lacagta digital ONT. Ontology ganacsiga bilawga suuqa sarrifka isweydaarsiga 09/03/2018.